Global Voices teny Malagasy » Manaiky ilay “Lalàna Manohitra ny Fampihorohoroana” Be Mpitsikera i Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Desambra 2013 14:54 GMT 1	 · Mpanoratra Anas Soliman Nandika miora
Voasokajy ho fampihorohoroana ny fangatahana ny fanovàna ara-politika ao Arabia Saodita ankehitriny, araka ny lalàna iray vaovao izay nampiharina nanomboka androany.
Neken'ny Filankevitry ny Minisitra notarihan'ny Mpanjaka Saodiana Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ny Alatsinainy [16 Desambra] teo ilay Lalàna ho an'ireo Heloka Fampihorohoroana sy ny Famatsiam-bola ny Fampihorohoroana . Naharay tsikera marobe  io volavolan-dalàna io rehefa navoakan'ny Amnesty International (AI) an-tsokosoko ny Jolay 2011 . Tamin'izany, nitsikera ny AI:
Raha ekena izany dia hanakana ny làlan'ireo hetsiky ny mpanohitra am-pilaminana na dia izay farany kely indrindra aza ho voapetaka tahaka ny fampihorohoroana ary mety iharan'ny fandikana zon'olombelona marobe. […] Malalaka loatra ny famaritana ny “heloka fampihorohoroana” ao anatin'ilay volavolan-dalàna hany ka mametraka azy aminà fomba famaky mivalampatra sy fanararaotana, ary mety tokoa hanameloka ny mpanohitra ara-dalàna.
Eo ambanin'io volavolan-dalàna io, ahitana ireo hetsika tahaka ny “mampidi-doza ny…firaisam-pirenena”, “manakantsakana ny lalàna fototra na ny iray amin'ireo andininy ao anatiny”, na koa ny “manimba ny lazan'ny fanjakana na ny toerany” ireo heloka fampihorohoroana.
Ny rakotr'ilay volavolan-dalàna “manohitra ny fampihorohoroana” araka ny navoakan'ny AI antsokosoko.
Raha jerena manokana, dia nametraka fanasaziana antranomaizina mandritra ny dimy taona farafahakeliny io volavolan-dalàna io ho an’ “izay mampiroborobo, na am-bava na an-tsoratra, ireo hetsika fampihorohoroana, na fotodresaka izay manohitra ny fironana ara-politikan'ny Fanjakana, na koa hevitra mandratra ny firaisan'ny firenena…”.
Tamin'izany, nisy mpitondrateny avy ao amin'ilay Antenimiera Mpanolo-kevitra niteny tamin'ny Reuters :
“Tsy ilay volavolan-dalàna navoaka no tena izy,” hoy i Mohammed Almohanna, mpitondra tenin'ny antenimiera mpanolo-kevitra.
“Noresahina tanatinà fivorian'ny Filankevitr'i Shura izany. Volavolan-dalàna izany ary nisy ireo fanovana vitsivitsy natao taminy mba hahazoana toky fa mifanentana amin'ny Sharia (Lalàla Islamika) io lalàna io, ary tsy mandika ny zon'ireo olom-pirenena na ireo lalàna misy ao amin'ny firenena,” hoy izy.
Mbola tsy navoaka ofisialy ny endrik'ilay lalàna farany.
Ao amin'ny Twitter, mitsikera ny mpampiasa iray antsoina hoe Sigh [ar]:
Mahatonga ny fikasana hanova ara-politika ao Arabia Saodita ho fampihorohoroana ny famaritana ny fampihorohoroana ao anatin'ilay Lalàna Fanamelohana ny Fampihorohoroana sy ny Famatsiam-bola azy, izay nekena androany!!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/27/55856/
 Naharay tsikera marobe: https://globalvoicesonline.org/2011/07/25/saudi-arabia-new-anti-terror-law-crushes-protests/
 navoakan'ny Amnesty International (AI) an-tsokosoko ny Jolay 2011: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/proposed-saudi-arabian-anti-terror-law-would-strangle-peaceful-protest-2011-07-22
 niteny tamin'ny Reuters: http://www.reuters.com/article/2011/08/06/us-saudi-terror-idUSTRE7751SL20110806